अँध्यारो सर्कल र फिक्का आँखाका लागि घरेलु उपचार - एशियाई टाइम्स
अँध्यारो सर्कल र फिक्का आँखाका लागि घरेलु उपचार
के तपाईका आँखाहरू थकित र दिक्क लागेका छन्? तपाईंको डिजिटल उपकरणहरू, टेलिभिजन, र निद्रा बिना रातहरूमा धेरै समय खर्च गरेपछि, तपाईं सबैले अँध्यारो सर्कल, फिक्का आँखाको समस्या सामना गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई चिन्तित तुल्याउन सक्छ। चिन्ता नलिनुहोस् तपाईको सबैलाई छिटो फिक्स गर्न यहाँ छ। यहाँ कालो सर्कल, फिक्का आँखा, वा मुनि आँखा झोलाका लागि घरेलू उपचारहरूको एक सूची छ।
तपाईंले आफ्नो दैनिक जीवनमा काँक्रा खानु भएको छ तर के तपाईंलाई वास्तवमै थाहा छ यसले फाइदा गर्दैछ? काकडी कसैको सम्पत्तीको साथ आउँदछ र छालालाई हल्का पार्न मद्दत गर्दछ। ताजा काकडीको बाक्लो स्लाइसहरू काट्नुहोस् र तिनीहरूलाई आधा घण्टाको लागि फ्रिज गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र 10 मिनेटको लागि तपाईंको आँखामा सिधा यसलाई राख्नुहोस्। काकडी मात्र तपाईंको आँखा शान्त छैन तर राम्रो परिणाम पनि दिन्छ।
२ गुलाब पानी
गुलाबजल सबै छाला सम्बन्धी मामिलाहरूको लागि युगहरूको लागि प्रयोग गरिएको छ। यो एक अत्यावश्यक चीज हो जुन तपाईंले आफ्नो छालाको कायाकल्प गर्नका लागि राख्नु पर्छ। कपास लिनुहोस् र तिनीहरूलाई गुलाबी पानीमा भिजाउनुहोस्, यसलाई तपाईंको बन्द आँखामा १ 15 मिनेटको लागि राख्नुहोस्। कपास हटाउनुहोस् र तपाईले नतिजा भरिएको देख्नुहुनेछ। उत्तम परिणामको लागि दैनिक दोहोर्याउनुहोस्।
जब तपाईं हरियो चिया खान्नुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ यो तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ किनकि यसमा रिच एन्टिऑक्सिडन्ट्सको गुण हुन्छ। यी एन्टिअक्सीडन्टहरू तपाईको शरीरका लागि मात्र राम्रो छैनन् तर तपाईको आखाँखा क्षेत्रलाई पनि लाभ पुर्‍याउन सकिन्छ। हरियो चियामा रहेको एन्टी-भड़काऊ गुणले आँखामुनि रहेको केशिकालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। केवल min० मिनेटको लागि फ्रिज गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। यी चिसो चिया ब्यागहरू आँखा क्षेत्र माथि राख्नुहोस् र यसलाई १० मिनेटको लागि बस्न दिनुहोस्।
आलुहरू प्राकृतिक एजेन्टहरूको धनी स्रोत हुन् जसले तपाईंको मुनि आँखाको ठोलो हल्का पार्न सक्छन्। आलुहरूमा स्वस्थ छाला, एन्जाइमहरू, र कसैको गुणहरूका लागि भिटामिन सी हुन्छ जसले आँखाको पफ्नेस कम गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं आलुको रस बाहिर लिनुहोस् वा केवल आँखाको मुनि आलुको टुक्रा टब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आलुको रसमा कपासको बलहरू डुबाउनुहोस्, तपाईंको आँखामा १० मिनेटको लागि राख्नुहोस्, र आफ्नो आँखाको क्षेत्र गुनगुने पानीले कुल्नुहोस्।
स्वस्थ र चमकदार छालाका लागि विभिन्न उत्पादनहरूमा दुध जहिले पनि प्रमुख घटक रहन्छ। दुधले ल्याक्टिक एसिड समावेश गर्दछ जुन कालो सर्कलको उपचार गर्न प्रभावकारी छ। यो पनि विटामिन ए को एक महान स्रोत हो अँध्यारो सर्कल को उपचार को लागी, कपास को चिसो दूध मा भिगो र आफ्नो आँखा माथि राख्नु। कपास १० मिनेट पछि हटाउनुहोस् र तातो पानीले सफा गर्नुहोस्।
टमाटर जत्तिकै रातोको रूपमा चम्किलो छाला पाउन, टमाटर आफैले छाला सम्बन्धी समस्याहरूको लागि उत्तम उपचार हो। टमाटरमा लाइकोपिनको उपस्थितिले नरम छालाको साथ ती गाढा आँखा झोलाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। राम्रो नतिजाको लागि टमाटरको रस र समान मात्रामा निम्बूको रस प्रयोग गर्नुहोस्। कपासलाई मिश्रणमा डुबाउनुहोस् र तपाईंको आँखाको झोलामा सावधानीपूर्वक राख्नुहोस् जसले गर्दा यसले तपाईंको आँखालाई नोक्सान पुर्याउँदैन। केही मिनेट को लागी छोड्नुहोस् र पानी संग कुल्ला। उत्कृष्ट परिणामहरूको लागि दैनिक दुई पटक दोहोर्याउनुहोस्।
सुन्तला भिटामिन ए र भिटामिन सीमा अत्यधिक मात्रामा समृद्ध हुन्छ संतरे तपाईंको छालाको तालिका बीचमा सबैभन्दा सामान्य सामग्री हो। केशरी जुस जब ग्लिसरीनको केही थोपा ड्रिपसँग मिसाइन्छ र कालो सर्कलबाट कुनै हानि नगरीकन छुटकारा पाउन मद्दत गर्दछ। कपासको प्रयोग गरेर मिश्रण लागू गर्नुहोस् र अनन्त लाभका लागि नियमित रूपमा लागू गर्नुहोस्।
सम्बन्धित विषयहरू:गाढा सर्कलघर उपचारआँखा झोला मुनि